खुशीलाल मण्डलको प्रश्नमै व्यंग्य : मधेसवाद बाँकी छ र ? - News - Radioupatyaka
Studio Time (NPT) : 01:33:02 PM
२३ वैशाख, जनकपुरधाम । राष्ट्रिय राजनीतिमै एक समयको चर्चित नाम हो, खुशीलाल मण्डल । राजनीतिमै जीवन बिताएका मण्डल अहिले भने गुमनाम जस्तै छन् । २००७ सालको राणा बिरोधी आन्दोलनबाट राजनीतिमा आएका उनी लामो समय नेपाली कांग्रेसमा रहे ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि मण्डलले कांग्रेसभित्र संविधानसभाको मुद्दा उठाए । पार्टी नेतृत्वले त्यसमा चासो नदेखाएपछि उनी निस्कृय बने । ‘त्यसपछि २०५१ सालमा स्व. गजेन्द्रनारायण सिंहको नेपाल सदभावना पार्टीमा प्रवेश गरेर मधेसका लागि आवाज उठाउन थालें’, उनी भन्छन् ।
खुशीलाल मण्डल मधेस समस्या समाधानका लागि पटक-पटक आन्दोलनमा होमिए । अहिले चाहिँ राजनीतिक घटनाक्रम नियाल्नमा सीमित बनेका देखिन्छन् । उनी मधेस मुद्दा बर्बादीको संघारमा पुगिसकेको देखिरहेका छन् । ‘मधेसवाद बाँकी रहेन’, उनले भने, ‘मधेसको नाममा राजनीति गर्नेहरु सत्ता सुखमा लागिपरेका छन् ।’
विगतमा मधेसबिरोधी काम गर्नेहरुसँगै अहिलेका मधेसका मसिहाहरु मिलेको मण्डलको आरोप छ । ‘केही अघिसम्म केपी ओलीलाई मधेस बिरोधी, प्रतिकृयावादी देख्नेहरु अहिले उनैले दिएको कुर्सिमा विराजमान छन्’, उनले भने, ‘मधेसको राजनीतिमा मधेसवाद बाँकी रहेको भए यो कसरी सम्भव हुन्थ्यो ।’
पुराना नेता मण्डल केपी ओली मात्र होइन, बाबुराम भट्टराई पनि खाँटी मधेसबिरोधी देख्छन् ।
मधेसको नाममा राजनीति गर्ने उपेन्द्र यादवले तिनै भट्टराईसँग पार्टी एकता गर्न लागेको सुन्दा आफूलाई धेरै अनौठो नलागेको उनले बताए । उनले भने, ‘मधेसवाद बाँकी रहेको थियो भने यस्तो सम्भव थिएन ।’